‘कोभिड–१९ को अर्को लहरबाट सुरक्षित रहन सहयोग गर्छौं’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
‘स्पुतनिक–५’ विश्वका तीन भ्याक्सिनमध्येको हो, जुन ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी छ ।
रूसको सरकारी कम्पनीले आफ्ना प्रविधि र अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न चासो व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौँ — मुलुकमा कोभिड–१९ को महामारी चलिरहेका बेला २०२० अगस्टमा पहिलो पटक नेपाललाई कोरोना भाइरसविरूद्धको खोपको आशा देखाउने मुलुक हो– रूस । त्यसबेला नेपालका लागि रूसका राजदूतले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग सिंहदरबारमा भेटेर आफ्नो देशले कोभिड–१९ विरूद्धको खोप उत्पादन गरेको र नेपाललाई पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । रूसी खोप ‘स्पुतनिक–५’ नेपालमा आइसकेको भने छैन ।
तपाईंले ६ महिनाअघि नै रुसले नेपाललाई कोभिड–१९ खोपमा सहयोग पुर्‍याउँछ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म रुसी भ्याक्सिन आइपुगिसकेको छैन नि, किन ?
रुस र नेपाल लामो समयदेखि नजिकको मित्र रहँदै आएका छन् । नेपाली जनताले कोभिड–१९ मा सामना गर्नुपरेका चुनौतीका बारेमा हामी सधैं ध्यान दिइरहेका छौं । यो महामारीले पर्यटन क्षेत्रलगायत नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर गरेको छ । २०२० सेप्टेम्बरमा हामीले पहिलो भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक–५’ को विकास गरेका थियौं । लगत्तै रुसले नेपाललाई २५ मिलियन डोजसम्म उक्त भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । रुस नेपाल सरकारलाई, नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन सक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ । हामी उक्त भ्याक्सिन नेपालमा दर्ता गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेको औषधि व्यवस्था विभागसँग नियमित सम्पर्कमा छौं । ‘स्पुतनिक–५’ को क्लिनिकल परीक्षण र अन्य आवश्यक सूचनाको सम्बन्धमा रुस पारदर्शी छ ।
स्पुतनिक–५ कति प्रभावकारी छ ? कति देशले यो खोप लगाए त ?
म के जानकारी दिन चाहन्छु भने हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कोभिड–१९ विरुद्ध तीनवटा भ्याक्सिन आपत्कालीन प्रयोगका लागि दर्ता भइसकेका छन् । ‘स्पुतनिक–५’ गमेलेय रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ इपिडिमियोलोजी एन्ड माइक्रोबायोलोजीले विकास गरेको खोप हो । यो राम्रो अध्ययन गरेर सबैभन्दा पहिलो दर्ता भएको मानव एडिनोवायरल भेक्टरमा आधारित प्लेटफर्म हो । ‘स्पुतनिक–५’ भ्याक्सिन ५० भन्दा बढी मुलुकमा दर्ता भइसकेको छ । रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित १० लाखभन्दा बढी जनताले यो खोप लगाइसकेका छन् । जसको कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन । ३१ सय जनतालाई यो भ्याक्सिनको ‘पोस्ट–रिजिस्ट्रेसनल’ क्लिनिकल परीक्षण गरिएको थियो । फेज–३ मा स्पुतनिकको क्लिनिकल परीक्षण यूएई, भारत, भेनेजुयला र बेलारुसमा भएको थियो । यो विश्वका तीन भ्याक्सिनमध्येको हो, जुन ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी छ ।
नेपालमा स्पुतनिक–५ भ्याक्सिन ल्याउनका लागि रुस र नेपालबीच कुनै सहकार्य भइरहेको छ ?
नेपालमा उक्त भ्याक्सिन प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास रुसले लिएको छ । नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन औषधि व्यवस्था विभागलाई गत मार्च १५ मै अनुरोध गरिसकेका छौं । हामीले पेस गरेका कागजातको समीक्षाका लागि कुर्दै छौं । ती कागजात रुसको प्रत्यक्ष लगानी कोषबाट पेस गरिएका छन् । यसअघि नै मैले भनेअनुसार हामी नेपाली पक्षसँग लगातार सम्पर्कमा छौं । हामी विश्वस्त गर्न चाहन्छौं कि उच्चस्तरीय क्षमताको भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर फेरि आउन सक्ने कोभिड–१९ को अर्को लहरबाट सुरक्षित राख्न र जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन रुसले सहयोग गर्नेछ ।
तपाईंले नेपालको रेलवे परियोजनाको विकासका बारेमा पनि रुचि देखाउनुभएको छ । पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङसँगको भेटवार्तामा नेपालमा रुसले रेलवे परियोजना विकासका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । रुसले कस्तो सहयोग गर्ने भनेको हो ?
हामीले आधुनिक रेल्वे सञ्जाल विकास गरेका छौं । आधुनिक रेल सञ्जालले काउकसस र उर्ल पहाडजस्ता जटिल भूभागसम्म मुलुकभर विभिन्न सामग्रीलाई एकीकृत गर्न सहयोग गरेको छ । रुसमा संसारको सबैभन्दा ठूलो रेल सञ्जाल छ । हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रयास देखेर अत्यन्त खुसी भयौं । मन्त्रालयले देशमा नयाँ यातायात पूर्वाधार तयार गर्न कडा मिहिनेत गरिरहेको छ । विशेषगरी पूर्व–पश्चिम रेलवे परियोजनालाई जोड्न सक्छ । रुसको सरकारी कम्पनीले आफ्ना प्रविधि र अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न चासो व्यक्त गर्दै नेपाली पक्षलाई पत्र पठाएको छ । हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार अहिले उक्त कम्पनीका प्राविधिकले नेपाली पक्षले प्रदान गरेको डाटा अध्ययन गरिरहेका छन् । साथै, रुसी पक्ष काठमाडौंमा लाइट मेट्रो निर्माणको परियोजनामा सहकार्य गर्न पनि तयार छ ।
नेपाल र रुसको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मैले पहिले पनि भनिसकें, रुस र नेपाल सौहार्दपूर्ण र घनिष्ठ सम्बन्ध भएका मित्र छन् । १९५६ जुलाई २० बाट दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसबेलादेखि नै हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ । हामी विश्वास गर्छौं, भर्खरै खोपको पहल, यातायात पूर्वाधारमा सहयोग, जलविद्युत् परियोजना निर्माण तथा मस्को–काठमाडौं सीधा उडान पुनःस्थापनाले द्विपक्षीय सम्बन्धको स्तरमा ठूलो वृद्धि गर्न सक्छ । रुसले दुवै देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कदर गर्छ । विशेषगरी रुस–नेपाल भ्रातृत्व दोस्रो विश्वयुद्धका दौरानमा रह्यो । त्यसबेला रुसका जनताले पश्चिमी र पूर्वी भागमा अलाइड फोर्स (जर्मनी, इटाली र जापानको सहकार्यको फोर्स) सँग लड्नुपरेको थियो । त्यसबेला नेपाली सैनिकहरूले पनि त्यही अलाइड फोर्ससँग लडेका थिए ।
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७७ ०९:०१